Kutaura kwakadzikira nezve tarisiro yekuvandudza yeyakagadziriswa indasitiri yekupakata muChina
Kunyange hazvo mvura yakapfava kurongedza yakapinda muChina muma1970, yanga isati yashandiswa zvakanyanya nevatengi veChinese nemaindasitiri anoenderana Asi muEurope, mvura inoshanduka kurongedza yakave inozivikanwa kwazvo. Kuzvitonga wega, izvi zvinogona kuve nechokuita netsika nemagariro ekufunga o ...
Chii chinonzi cubitain
LDPE cubitainer yakaomarara-yakaomesesa epurasitiki cube, kana dundira, iyo yakaoma asi ichichinjika uye iri nyore kubata. Cubitainer inogara zvakakwana kuti ishandiswe yega asi inogona zvakare kushandiswa nekarati yekunze katoni kugadzira rakasimba uye risingaperi pasuru. Iyo ine yakamisikidzwa mutsipa kupedzisa kuitira kuti ini ...
Kavha bhegi remvura mudziyo wesipo yekuchenesa ruoko
Ose mairi LDPE cubitainer uye mabhegi akatwasuka anozivikanwa pakuzadza sipo ruoko sanitizer. Kupakira bhegi remvura mudziyo wesipo yekuchenesa ruoko inosangana nezvinodiwa zveDAA uye zvese zvezvigadzirwa zvinovaita sarudzo huru yekuchengetedza mvura uye zvimwe zvakawanda zvingangodaro Midziyo nemabhokisi ari als ...
LDPE cubitainer 5 litre ine spout yekurapa ultrasound gel
Yedu LDPE cubitainers anozivikanwa pakuzadza ekurapa Ultrasound gel. Vatengi vanowanzo sarudza spout kuti ibudise gel. LDPE cubitainer ine spout yekurapa ultrasound gel inosangana nezvinodiwa zveDAA uye zvese zvigadzirwa izvo zvinoita kuti ive sarudzo hombe yekuchengetedza mvura ...
Kavha mabhegi e hypochlorous acid disinfectant
ne admin pane 20-09-06
Kufuridzirwa neCOVID-19, pane kuwedzera kuri kudiwa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya senge disinfectant nedoro. Kubva kutanga kwegore ra2020, michina yedu iri kushanda maawa makumi maviri nemana zuva rega rega kumusika we hypochlorous acid disinfectant nedoro. Tiri kutumira anopfuura 100000 hrs mabhegi ane t ...
Ichi ndicho chigadzirwa chedu chitsva chine dhizaini dhizaini. Bhegi racho rakagadzirwa nemapurasitiki akawanda. Iyo yekunze layer (polyamide + polyethylene) inodzivirira kubva kuoksijeni uye unyoro; kuwanda kwayo uye kuumbwa kwayo kunogona kusiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kana chigadzirwa. Iyo yemukati layer (polyethylene) yakasununguka ...
Zvakawanda uye zvakanyanya vatengi vedu vanotanga kushandisa cheertainer kuzadza zvigadzirwa zvemvura. Zvino, chii chinofadza? Chayo chivharo chitsva chekuputira chinosanganisa kushanduka kweBhegi muBhokisi uye zvakavandudzwa zvakanakira zvigadzirwa zvakaomarara kana zvakaomarara, izvo zvinoita kuti cheeratainer ive yakakwana alt ...